site admin na 21-11-10
Igwe igwe anaghị agba nchara n'èzí na-edobe ọtụtụ ọnọdụ siri ike. Ndị a na-agụnye ihu igwe, okpomọkụ, ihe na-ehicha kemịkalụ na ncha, na ndị ọzọ, nke na-eme ka ha nwee ike ịdaba na corrosion na ntụpọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na aha nke ihe s ...
Mgbakọ bụ ụzọ kacha mma isi jikọọ na ndị enyi gị kparịta ụka; Ahịhịa anụ ahụ na nnọkọ ahụ nwere ike ịkwalite ọbụbụenyi n'etiti ibe ha. Ma nkwadebe mmanya na-agwụ ike bụ nkwadebe na-agwụ ike na-enweghị enyemaka nke ndị ikwu na ndị enyi. Ka esi s...
Ekele dịrị Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd. maka ihe ịga nke ọma ya zuru oke na isonye na ngosi ihe ngosi ịntanetị nke CCH2021 10. Mgbe gị na ọtụtụ ndị ahịa na-enweta nkwekọrịta nkwado ma ọ bụ ebumnuche, ...
Ihe 11 ị ga-eme na Halloween ma ọ bụrụ na ị naghị aga aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ
site admin na 21-10-30
Ị naghị eme atụmatụ ịga n'ụlọ ruo n'ọnụ ụzọ? Nke a bụ ihe omume ole na ole gbasara Halloween ị nwere ike ime n'ụlọ (ma ọ bụ nso), gị na ụmụaka ma ọ bụ naanị gị. Ihe na-atọ ụtọ ime na Halloween n'ụlọ: 1. Ịchọ mma kuki ma ọ bụ cupcakes Ọ bụghị Halloween na-enweghị ụbara sweets, nri? Kpọkọtanụ ụmụ gị,...
Kedu mgbe unyi gị dị njikere ighe?
Naanị n'ihi na unyi na-atụgharị na-acha ọcha, apụtaghị na oge eruola isi nri. Ịtụkwasị burgers na-enweta na steak na grill ozugbo ntụ unyi ga-agbapụ naanị n'èzí anụ ahụ. Mgbe nke a mere, ị ga-achọ ịhapụ anụ ahụ na grill ogologo oge iji hụ na ...
4+1 gas ghere oghe
site admin na 21-10-23
CLUX 4-Burner Gas Grill na Side Burner bụ grill zuru oke maka ndị mbido na ndị na-anụ ọkụ n'obi. N'inwe ohere nri zuru oke iji zụọ ndị obere na ndị na-ajụ obere, ihe ọkụ n'akụkụ aka iji sauté, simmer na ọkụ, mkpuchi igwe anaghị agba nchara dị arọ, na ...
Ihe ngosi franchine ịntanetị nke iri CCH2021
CCH2021 Ngosipụta franchise mba ụwa nke iri bụ Ministri Azụmahịa nke China kwadoro ihe ngosi nke franchise nke China wee hiwe ya na Beijing na 1999. Ihe ngosi nka nka ọkachamara buru ibu nke China Chain Store & Franchise kwadoro ...
Emepụtara Shenzhou 13 nke ọma wee mechie ya nke ọma!
site admin na 21-10-16
Dị ka ụlọ ọrụ China Manned Space Engineering Office si kwuo, na 0:23 na Ọktoba 16, 2021 n'oge Beijing, rọketi ụgbọ elu Long March 2 F Yao 13 na-ebu ụgbọ elu Shenzhou 13 mmadụ ga-abụ nke ziri ezi n'oge a kara aka na Satellite Launch Center Jiuquan. Mgbe ịgbanye ọkụ na ịmalite, gbasara ...
Kedu ihe ị ga-esi esi na oven Pizza ma e wezụga Pizza?
Ị na-eche ma ọ bara uru itinye ego na oven pizza ma ọ bụrụ na ihe niile ị nwere ike esi nri bụ pizza-mgbe niile, n'ezie ọbụna ndị hụrụ pizza n'anya n'etiti anyị enweghị ike iri ya kwa ụbọchị! Ọfọn, ị maara na nke ahụ bụ mmalite nke ihe ị nwere ike isi na oven pizza gas? Enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ...
Ọdịiche dị n'etiti anụ mmanya ndị China na anụ mmanya ndị mba ọzọ
Na mgbakwunye na ịbụ onye a ma ama n'obodo anyị, anụ mmanya na-ewu ewu na mba ofesi, mana anyị niile ma na omume ịhịa aka n'ahụ dị iche na obodo gaa na mba, yabụ ka anyị leba anya na China. Kedu ihe dị iche n'etiti anụ mmanya na anụ ndị mba ọzọ?
Banyere nkwakọ ngwaahịa grill
site admin na 21-10-07
Ọ bụ ezie na grills dị ka ihe siri ike a ga-ebufe, ọ ka kwesịrị ịchịkọta ha nke ọma iji hụ na mmiri mmiri ma ọ bụ njikwa siri ike emebighị ha. Ka m kọwaara gị ngwugwu dị iche iche nke ọtụtụ grills clux nke ụlọ ọrụ anyị nwere n'oge na-adịbeghị anya ...
Ezigbo ndị enyi m niile, na 1st Oct. anyị ga-enwe ezumike ụbọchị atọ. Na-eme mmemme ụbọchị mba China. Kedu ihe bụ ụbọchị mba China na otu esi eme ya? Ụbọchị mba China, nke a na-akpọ 国庆节 (Guóqìng jié) n'asụsụ Chinese, na-eji nnukwu ọmarịcha eme ememe kwa afọ na October 1 dị ka ezumike ọha. ...
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/6